အားလုံးအတွက် Fiber အင်တာနက်
အိမ်နဲ့ရုံးအတွက် အူရီဒူးရဲ့ Supernet Fiber က အမြန်ဆန်ဆုံး နှင့် အားအထားရဆုံး ဖိုင်ဘာကွန်ရက်ဖြစ်မှာပါ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့၊ chat ဖို့၊ ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက် အရမ်းလျင်မြန်တဲ့ upload/download အမြန်နှုန်းတွေနဲ့ လူများများသုံးနိုင်ဖို့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ အစီအစဉ်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
အဆင်ပြေပြေနှင့်အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ရန်လိုအပ်သည့် တပ်ဆင်မှုများ နှင့် အလွယ်တကူငွေပေးချေနိုင်မည့်နေရာအများအပြား ထားရှိခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားပါမည်။
iflix (၆လ အကန့်အသတ်မရှိ ကြည့်ရှုခွင့်)
အဆင့် ၁ - ဘေလ်ရရှိခြင်း
Supernet သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Supernet လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာ အား ကျသင့်ငွေ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ နှင့်အတူ မိမိ စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်သို့ဘေလ်ပေးဆောင်ရမည့်ရက် မတိုင်ခင် SMS မှတဆင့် ၁၅ ရက် ကြိုတင် လက်ခံရရှိပါမည်၊၊ SMS မှာ sender id “Supernet” အမည်ဖြင့် ပေးပို့ ပါမည်။
လူကြီးမင်းလက်ခံရရှိမည့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပုံစံ (SMS)
၁) ဘေလ်ပေးဆောင်ရမည့် ကာလ
၂) သတ်မှတ်ထားသော ဖေါ်ပြပါ နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရမည့် ရက်စွဲ မတိုင်ခင် ပေးဆောင်ရမည်
၃) ငွေပေးဆောင်ရာတွင် Invoice (သို့ ) Bill နံပါတ် အားအသုံးပြု ရမည်
၄) Supernet ဘေလ်ပေးဆောင်ရမည့် သင့်ရဲ့ID
၅) မိမိ subscribe လုပ်ထားသော မြန်နှုန်းကို ရွေးချယ်ပါ
၆) အခွန်ပါဝင်ပြီး ယခုလပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏ
၇) ကြိုတင်ပေးသွင်းငွေနှုတ်ပြီး ပေးဆောင်ရန် ကျန်ရှိငွေပမာဏ
၈) ယခင်လက်ကျန်ပေးသွင်း ပမာဏ
၉) သုံးစွဲသူ ပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏ
အဆင့် ၂ - ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းလင်း
ငွေပေးချေရန် - မည့်သည့်နည်းလမ်းများအား အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုအား လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်နည်း။
ငွေပေးချေမှုအား အောက်ဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းများထဲမှ တခုဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအသေးစိတ်အားသိရှိရန် မိမိ နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းအား icon အားနှိပ်၍ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အူရီဒူး Supernet သုံးစွဲသူများသည် 8mbps ဒေတာ နှင့်အထက် အသုံးပြုပါက iflix တွင် အကန့်အသတ်မရှိ ၆လစာ စာရင်းသွင်းကြေးကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိရန် ၀၉၉၇၀၀၀၀၂၁၆ ကိုခေါ်ဆိုပါ
၁။ iflix အပိုလက်ဆောင်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
FTTH 8mbps နှင့် အထက်သုံးစွဲသူများသည် အူရီဒူးမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော iflix တွင် ဇာတ်လမ်းများ၊ တီဗွီစီးရီးအစီအစဉ်များကို ၆ လ အကန့်အသတ်မရှိ စာရင်းသွင်း ကြည့်ရှုခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ ၆လပြီးလျှင် အူရီဒူးမြန်မာမှ သတ်မှတ်ထားသော လစဉ်ကြေးကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလစဉ်ကြေးကို အူရီဒူးမြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ iflix အပိုလက်ဆောင်ကိုမည်သို. ရရှိနိုင်မည်နည်း။
8 Mbps နှင့်အထက် FTTH သုံးစွဲသူများသည် FTTH ၀ယ်ယူသောအခါတွင် စာရွက်စာတမ်းတွင် မိမိဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည်.စွက်ပေးရမည်။
သုံးစွဲသူသည် FTTH ၀န်ဆောင်မှု ကိုစာရင်းသွင်းထားသော ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 09969696010 ကို iflix ဟု စာပို.ပါ။
ထိုအခါ 09969696010 မှ ကုတ်တခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ - “1234AbcD”).
Android သုံးစွဲသူများသည် iflix အက်ပလီကေးရှင်း ထဲရှိ ဘေး menu မှ Redeem Voucher သို့ဝင်ရောက်ပြီး redeem ကုတ်ဒ်ကို ရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
ios အသုံးပြုသူများသည် iflix.com/redeemသို့ဝင်ရောက်ပြီး ကုတ်ဒ်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့် ကာ Redeem ကိုနှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကုတ်ဒ်နံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပြီးနောက် သုံးစွဲသူ၏ iflix အကောင့်ထဲတွင် ခြောက်လစာ စာရင်းသွင်းအစီအစဉ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် iflix တွင် ခြောက်လစာ အကန့်အသတ်မဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းတို့အတွက် အင်တာနက်ခ ကျသင့်မည်လား။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းတို့အတွက် မိမိအသုံးပြုသော ဒေတာအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ခြောက်လစာ အကန့်အသတ်မရှိဆိုသည်မှာ စာရင်းသွင်းခ ကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။
၄။ iflix တွင် လစဉ်ကြေးစတင်ပေးချေသည့်နေ့ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။
Account menu ထဲရှိ Subscription အောက်တွင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၅။ iflix application ကိုဘယ်လို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သလဲ။
အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်: http://zone.ooredoo.com.mm/mm/iflix.aspx
၁) Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။
Supernet fiber ဝန်ဆောင်မှု သည် အမြန်ဆန်ဆုံး နှင့် တည်ငြိ်မ်ပြီး ယုံကြည်ရသော အင်တာနက်လိုင်း ဖြစ်သဖြင့် မိတ်ဆွေ၏ အိမ်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် တပ်ဆင်သုံးစွဲနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
၂) ဘယ်လောက်မြန်နှုန်း ရရှိနိုင်မလဲ။
ဝယ်ယူသုံးစွဲချိန်တွင် သုံးစွဲရန် ရွေးချယ်ထားသော အင်တာနက်မြန်နှုန်းအတိုင်း အတိအကျရရှိသုံးစွဲနိုင်မည်။
၀၉ ၉၇ ၀၀၀၀ ၂၁၆ သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ အသေးစိတ် သိရှိရန် မေးမြန်းစုံးစမ်း၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှ လိုအပ်သော အကူအညီပေးရန် ဆက်သွယ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၄) Supernet Fiber Service အား မည်သည့်နေရာများတွင် တပ်ဆင်သုံးစွဲနိုင်မည်နည်း။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မိတ္ထီလာ၊ လားရှိုး၊ တောင်ကြီး မြို့ ကြီးများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
၅) Supernet Fiber Service လျှောက်ထားရန် ဘာတွေလိုအပ်လဲ။
သုံးစွဲသူမှ လိုအပ်သော အချက်အလက်များအား ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရန်ပုံစံတွင် ဖြည့်ရမည်။ သဘောတူညီကြောင်းစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မှတ်ပုံတင်မိတ္ထူ နှင့် ပတ်စပို့ မိတ္တူ များလိုအပ်ပါသည်။
၆) လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်ချိန်မှာရော အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အရန် Power Supply ရှိပါက အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၆) Supernet Wireless နှင့် Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှုခြားနားချက်ကိုဖေါ်ပြပါ။
Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှုမှာ ဖိုင်ဘာကြိူးဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသောကြောင့် ရွေးချယ်ဝယ်ယူထားသော အင်တာနက်မြန်နှုန်းအတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိပဲ အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက်ဒေတာ သုံးစွဲနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
၈) ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော Supernet Fiber အင်တာနက်မြန်နှုန်းများ မည်မျှရှိလဲ။
အင်တာနက်မြန်နှုန်း 100Mbps ထိ ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၉) ကျသင့်သောနှုန်းထားတွင် အခွန်ငွေ အတွက် ကောက်ခံထားပါသလား။
ကျသင့်သောနှုန်းထားပေါ်မူတည်၍ ကုန်သွယ်ခွန် ၅ရာခိုင်နှုန်း ကို ထပ်မံ ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀) နှစ်စဉ်ကြေးထပ်မံ ပေးချေရန် လိုအပ်ပါသလား။
အူရီဒူး Supernet FTTH ဝန်ဆောင်မှုအတွက် နှစ်စဉ်ကြေးမရှိပါ။
၁၁) စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှုများအတွက် ထပ်မံပေးချေရမှာလား။
တပ်ဆင်ခများသည် ရွေးချယ်ဝယ်သော အခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
၁၂) ရွှေ့ ပြောင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ယာယီရပ်ထားခြင်းများအတွက် တခြားကျသင့်ငွေများရှိပါသလား။
ဝယ်ယူလျှောက်ထားစဉ်က သဘောတူထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၃) ရွှေ့ ပြောင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ယာယီရပ်ထားခြင်းများအတွက် အချိန်မည်မျှ လိုအပ်သနည်း။
ရွှေ့ ပြောင်းတပ်ဆင်ခြင်း ၇-၁၅ရက်တွင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းအတွက် လက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် ပြန်လည်ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၄) အင်တာနက် ချိတ်ဆက်သုံးစွဲရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ အားလာရောက် ဖြေရှင်းချိန်တွင် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ထပ်မံ ပေးဆောင်ရမှာလား။
၁၅) Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှုသည် ကြိုတင်ငွေပေးချေစနစ်လား ၊ သုံးစွဲပြီးမှ ပေးချေရမည့် စနစ်လား။
လစဉ်သုံးစွဲပြီးမှ ပေးဆောင်ရမည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများသည် လစဉ် ငွေပေးချေရန် ကျသင့်ငွေပမာဏပါရှိသော invoice များနှင့် နောက်ဆုံးပေးချေရန် နေ့ များအား စာရင်းပေးထားသော ဖုန်းနံပါတ်များသို့အကြောင်းကြားသော စာတိုပေးပို့ မှု(SMS)များ၊ စာရင်းပေးသွင်းထားသော email လိပ်စာများသို့email ပေးပို့ ခြင်းများ ၁၅ရက်ကြိုတင်၍ လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၆) ငွေပေးချေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပါ။
ဘဏ်များ ၊ i-Banking စနစ်များ၊ နီးစပ်ရာ အူရီဒူးအရောင်းဆိုင်များ၊ M-pitesan ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
၁၇) ငွေပေးချေခြင်း အဆင်ပြေအောင်မြင်ကြောင်းမည်သို့သိရှိနိုင်သနည်း။
အူရီဒူးဆိုင်များတွင် ပေးချေပါက ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ပြေစာ၊ ဘဏ်များတွင် ပေးချေပါက ဘဏ်မှလက်ခံရရှိကြောင်း ပြေစာ၊ i-banking များအတွက် e-receipt တို့ရရှိပါမည်။
၁၈) အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် မည်ကဲ့သို ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။
မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊မိတ္ထူ ယူဆောင်လာ၍ Myanmar Plaza ရှိ အူရီဒူးဆိုင်တွင် လာရောက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၁၉) တပြိုင်နက်တည်း စက်အများအပြား သုံးစွဲနိုင်ပါလား။
တပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တပြိုင်တည်းသုံးစွဲသူ အရေအတွက်များပါက အင်တာနက်မြန်နှုန်းနှေးလာနိုင်ပါသည်။
၂၀) စူပါနက်ဖိုင်ဘာဝန်ဆောင်မှုအား ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ယာယီရပ်ထားခြင်းများအား သုံးစွဲပြီး မည်မျှအကြာတွင် ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှု အား ယာယီသုံးစွဲခြင်း မပြုပဲ အနည်းဆုံး ရက် ၃၀ မှ အများဆုံး ရက် ၉၀ ထိ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်းငံကြေး ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူ မှ ဆိုင်းငံ့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှုအား ရက် ၉၀ အသုံးပြုပြီးနောက် မှသာအသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူဘက်မှ Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှုရယူပြီး ၆ လအတွင်း ဝန်ဆောင်မှု အားရပ်ဆိုင်းလိုက်မည် ဆိုပါက ရပ်ဆိုင်းကြေး ပေးဆောင်ရမည်။ သုံးစွဲသူမှ Supernet Fiber ဝန်ဆောင်မှု အား စတင် ရယူပြီးသည့်နေ့မှ စ၍ ၆ လကြာမြင့်ပြီး နောက်ပိုင်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်မည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းကြေး ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။
၂၁) တပ်ဆင်ရန် အချိန်မည်မျှ လိုအပ်ပါသနည်း။
ပထမဆုံး ကျသင့်ငွေပေးချေပြီး ၃-၅ရက်အတွင်း တပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသည်။